Mbụ wepụtara na 2011, iCloud bụ Apple na ígwé ojii version na-enyere ndị ọrụ na-na-faịlụ synced n'etiti ha iPhone, Mac, iPad na iPod aka. Wezụga-eme ka a ụzọ ndabere gị iPad ma ọ bụ iPhone, iCloud na-arụ ọrụ site na ichekwa gị kalenda, kọntaktị. Site OS X Mavericks na iOS 7, ọ na-eme ọ bụla onye ọrụ okwuntughe synced n'etiti Mac na iOS. Ọ bụ ezie na iCloud bụ iji tụnyere ndị ọzọ ígwé ojii ọrụ ndị dị ka Dropbox, Google Drive, na Microsoft SkyDrive, ya miri emi mwekota na OS X na iOS enye pụrụ iche atụmatụ. N'ụzọ dị mwute, ya anya ka ọtụtụ ọrụ nke Apple si iCloud ọrụ taa na-enwe mbipụta na n'elu ikpo okwu.
Top 10 nsogbu na ngwọta banyere iCloud on iPhone
Esemokwu # 1: The iCloud mmekọrịta adịghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi
Apụl iCloud ọrụ na-abụkarị ngwa ngwa, mụ na pụrụ ịdabere na. Otú ọ dị, e nwere ike inwe nsogbu ụfọdụ nke gbochie MobileFamilyTree ma ọ bụ MacFamilyTree si syncing gị na ezinụlọ gị osisi.
Common iCloud mmekọrịta Nsogbu
Ọbụna ma ọ bụrụ na iCloud bụ na OS X Yosemite kwuru, sị "Biko Kwado iCloud."
Aka ngwaọrụ gị niile na mmekọrịta gị na Mac, OS X Yosemite eji ọhụrụ iCloud mbanye. N'adịghị ka iOS 8, rịba ama na ọ dịghị nwere na mbụ-imezi iCloud ndakọrịta. Mgbe iCloud akaụntụ e kwalite ka iCloud Drive, ọ ga-aba mmekọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ na-adịghị akwado ma ọ bụ jiri iCloud mbanye. Otú ọ dị, usoro a pụrụ ịgbanwe.
Mgbe otutu mgbalị "-apụghị Malite iCloud mmekọrịta."
Ọ bụrụ na ị na-ugbu a na-agba ọsọ LogTen Pro 6.5.x, ma nke nwere atụmatụ maka upgrading ka iOS 8 ma ọ bụ OS X Yosemite, biko chọta peeji nke: LogTen Pro 6 & iCloud Drive
Tọrọ atọ na "Merging na a logbook na iCloud."
Dabere na logbook size, usoro na-ewe banyere 15 nkeji ma ọ bụrụ na ị na-eji iCloud n'ihi na otutu ngwaọrụ na nwere ibu logbooks. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na mbụ na-eji WiFi mmekọrịta, zuru mmekọrịta dị mkpa iji gosi na niile ndenye.
The data si logbook egosighi na ngwaọrụ ndị ọzọ na
Gbalịa na-eche maka 15 nkeji. The ngwa atụkwasịkwara iCloud achọ ọ ya data uploaded iCloud. Mgbe e mesịrị, ngwá ọrụ na-mkpa maka iCloud ka mgbanwe na hazie ha.
Esemokwu # 2: nke na Microsoft Outlook
Biko mara na iCloud akwado naanị Outlook 2007 na Outlook 2010. Ọ bụrụ na ị na-ugbu a iji Office 2013, ọ ga-arụ ọrụ.
Esemokwu # 3: iCloud Drive Issues
Site-apụghị ịhụ anya nchekwa na-ajụ ji ngwa ọdịnala na mmepe, Apple na nso nso kwalite iCloud ka a mepụtara ikpo okwu maka ojii nchekwa dị ka Google Drive ma ọ bụ Dropbox. N'ụzọ dị mwute, mgbanwe a mere nsogbu ụfọdụ ndị ọrụ.
Esemokwu # 4: iCloud nchekwa Ga-Ịmụbawanye
Isiokwu agụnye nchekwa apụghị-akp; nchekwa na-apụghị meghere, na ọmụma a na-echekwara apụghị-emeghere. Ọtụtụ ndị na-eji iCloud mbubata ibe edokọbara si Mac. Niile nke ibe edokọbara nchekwa bụ n'ebe ahụ, ma ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ghara inwe nchekwa na mụbaa ma site abụọ-ịpị ma ọ bụ site na nri-na ịpị na ịpị "Ịmụbawanye". Nke ahụ bụ n'ihi na ihe nchọgharị weebụ na Windows nhazi-akwado site na iCloud.
Esemokwu # 5: ngwa ngwa Search ghara ịhụ Na All Fields
Mgbe nzi search adịghị chọta ubi mgbe ị chọọ ihe ndekọ dị iCloud, nyochaa iCloud aka maka search.
Esemokwu # 6: Documents zoro ezo
A zoro ezo akwụkwọ n'ime OS X bụ otu n'ime ihe ndị kasị nsogbu na iCloud. Ọzọkwa, a ọtụtụ ndị na-na-nwetara Apple si ngwa ma ọ bụ omume na-mere ka mmekọrịta ozugbo. Na ụfọdụ faịlụ na ụdị dị ka keynote ma ọ bụ Pages, nke a dị mma. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ manụ n'ihi na ihe niile ọzọ. Luckily, e nwere nza nke nhọrọ na-adị ka nwere ohere ndị faịlụ-enweghị nsogbu.
Esemokwu # 7: Ike banye na iCloud on Mac ruru ka na-anya na-ekwu na adreesị ozi-e na-adịghị e kwupụtara.
Ọtụtụ ndị nwere ike banye na ya n'ihi na njikere "akaụntụ bụghị kwupụtara - Lelee gị email maka ntuziaka maka verifying akaụntụ gị." Iji dozie ihe iseokwu a, ị kwesịrị ị mbụ nso na-emeghe iCloud tupu ị nwaa banye-na iCloud. Nke abụọ, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị dozie nsogbu, na-agbalị ego gị junk nchekwa ma ọ bụ email nchekwa iji nyochaa email na-zitere site na Apple. Ọ bụrụ na ị na-enwe dịghị nkwenye email gị junk nchekwa ma ọ bụ email nchekwa, na-agbalị pịa na ndekọ ego Email bọtịnụ na iCloud mmasị.
Esemokwu # 8: Ike banye na iCloud on Mac ruru otu Nyocha arịrịọ.
Ọ bụrụ na ị na-ugbu a chere ihu Nyocha arịrịọ nsogbu, nyochaa ma ọ bụrụ gị os X ọrụ na akaụntụ nwere nchịkwa ùgwù. Ọ bụrụ na ị na-ite na dị ka ọkọlọtọ onye ọrụ na-enweghị nchịkwa ùgwù, e nwere ike ime na i nwere ike inweta ihe Nyocha anya na ekwu, sị: "System Mmasị na-agbalị gbanwee Directory Services nhazi." Iji dozie ihe iseokwu a, tinye nchịkwa si na aha njirimara na paswọọdụ aka System Mmasị ịgbanwe ọnọdụ.
Esemokwu # 9: natara "okpu aha njirimara ma ọ bụ paswọọdụ" mgbe agbali banye na iCloud.com
Iji dozie nsogbu a, tinye dum Apple ID n'elu na ịbanye na. The kasị nkịtị ndudue bụ:
• Ọ bụrụ na gị zuru ezu Apple ID bụ username@me.com, echefula pịnye ma ọ bụ ndenye dum ihe. Anwala banye na dị nnọọ "na aha njirimara". Jide n'aka na Onye ndu mkpọchi igodo na-nyeere n'ihi na ihe niile usernames na okwuntughe bụ ukwuu mwute.
• Jide n'aka na ị na-eji ezi iCloud-metụtara Apple ID na ọ bụghị ndị ọzọ ma ọ bụ dị iche iche NJ eji. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu Apple ID, Jiri gị Apple ID maka Apple ọrụ.
• Gaa Leta na iforgot.apple.com, na mgbe ahụ tọgharịa gị Apple ID paswọọdụ bụrụ na achọrọ.
Esemokwu # 10: m ike họrọ otu iCloud ndabere ruru ezughi oke nchekwa
E nwere ufodu ebe iCloud backups nwere ike ọgaghị adị gị iOS ngwaọrụ. Onye mbụ bụ na-ekwe omume na ị dara iji mee ka onye iCloud backups maka ngwaọrụ gị ọma. Nke abụọ bụ na ngwaọrụ gị na-eji ihe na mbụ iOS version karịa ihe ị na-eji ka anya dị ka i mere nkwado ndabere na mpaghara. Atọ bụ na o na i mere ọzọ, ma ọ bụ i nwere dị iche iche iCloud akaụntụ. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ na o na i adịghị kwadoo elu n'ime 180 ụbọchị.
Apple a ugbu a emelite ya usoro ọnọdụ peeji ịnọgide n'idozi mbipụta na 11 iCloud-metụtara ọrụ. The ọrụ na-agụnye akwụkwọ na ígwé ojii, Back to My Mac, iCloud ndabere, iCloud Akaụntụ & banye, iCloud Drive, iCloud Mail, iCloud Eriri Ngakọ Igodo, iMovie Theater, Photos na Chọta My iPhone, iPad, iWork maka iCloud Beta, iPod aka na Mac.
Olee otú iji weghachite Data si iCloud ndabere File
> Resource> iCloud> Ihe Ị Pụrụ Ime na iCloud Issues on iPhone